Waxaa shalay dalka Kenya ka dhacdya doorashooyin ay ka qeyb galeen Malaayiin qof oo u dhashay dalkaasi, waxaana Doorashada ay tahay mid xasaasi ah oo ay ku tartamayaan masuuliyiin kala duwan oo ay ugu horeeyaan Madaxweynaha talada dalkaasi hada haya ee Uhuru Kenyatta iyo Hogaamiyaha Mucaaradka Raila Odinga.
Madaxweynaha talada haya ee Kenya Uhurru Kenyatta ayaa ila iyo hadda hogaaminaya tirinta codadka doorashadi madaxtinimada ee Talaadadi shalay ka dhacday dalkaasi, waxaana la saadaalinayaa in madaxweyne Uhurru uu ku guuleesan doono doorashadaasi.
Tirinta codadka ayaa wali socaneysa, balse guddiga doorashada gacanta ku haya ayaa sheegay in Madaxweyne Kenyatta uu ku hogaaminayo 55 boqolkiiba halka hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu hadda marayo 44 boqolkiiba.
Guddiga doorashooyinka maamulaya ayaa heysta muddo todobaad ah si ay usoo bandhigaan natiijada rasmiga ah, balse waxay heystaan ikhtiyaar ah inay soo hormarin karaan natiijada si looga hortago qalalaase.
Hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi ee Raila Odinga ayaa durbaba qaadacay natiijada hordhaca ah, isaga oo ka dalbaday guddiga doorashooyinka inay soo gudbiyaan dukumintiyada goobjoogayaasha wakiilka uga ah goobaha codbixinta xisbiyada siyaasadda.
Xarumaha ay ka socdaan tirinta codadka doorashada waxaa ku sugan Diblumaasiyiin reer Galbeed ah iyo guddiyo kormeer ah si ay u xaqiijiyaan in doorashada u dhacday si cadaalad ah kana reeban ku shubasho iyo wax isdaba marin.
Waxaa wali ka jira dalka Kenya cabsi la xariirta inay khalalaasooyin dhacaan marka natiijada si rasmi ah loogu dhawaaqo, waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee dalka Kenya gaar ahaan kan magaalada Nairobi.
August 10, 2017 tuugahaladilo2015